Bahlomule koweLANGA neBerea Tech - Ilanga News
Home Izindaba Bahlomule koweLANGA neBerea Tech
Bahlomule koweLANGA neBerea Tech
UMHLELI weZindaba weLANGA uMnu Sazi Majola (ofake izibuko) noMnu Sibongiseni Magwaza waseBerea Tech ngesikhathi kutonyulwa amagama alabo abawine umfundaze. ISITHOMBE NGU: SKHOSIPHI MTHEMBU
LIZOFIKELA ezinhlelweni ezintsha zokufunda ibutho lesi-5 labafundi abawu-10 baseBerea Technical College, abathole ithuba lokufunda mahhala ngokohlelo lomfundaze weLANGA nalesi sikhungo olwaqala ngo-2017. NgoLwesihlanu, ILANGA neBerea Tech bebenomcimbi wokutomula amagama awu-10 abantu abanenhlanhla yokuyoqhuba imfundo yabo kulesi sikhungo. Le nhlanhla engandele bani, iwele kuZwelasembo Mkhize, uNdumiso Mthethwa, uNkosikhona Mthembu, uThobelani Mkhwanazi, uNontuthuko Zulu, uNompumelelo Msomi, uFezeka Ndlovu, uNosipho Ngcobo, uMhlonishwa Dlamini noSiphiwe Msane.
UMnu Sibongiseni Magwaza okhulumela iBerea Tech, uthe ukubheduka kweCovid-19, kwenze lesi sikhungo sahlela amacebo okuthi singaqhubeka kanjani nokulekelela abafundi ngendlela elula, safaka izincwadi zomsebenzi odingwa ngabafundi kwithala lonyazi (digital space). Uthe ziwu-160 izincwadi ezifakwe kuleli thala, kanti kudingeke ukuba kuqashwe ababhali abangaphezulu kwabawu-80 ukuba babhale lezi zincwadi ngesikhathi seCovid-19. Kulolu hlelo abafundi bayakwazi ukungena esifundweni noma kuleyo ncwadi abasuke beyisebenzisa ngisho besemakhaya.
Kukhona nezithombemnyakazo (videos) ezisuke zikhombisa lokho okusuke kukhulunywa ngakho, okwenza kube lula ukuqonda lokho umfundi asuke efunda ngakho. UMnu Magwaza uveze nokuthi abafundi bayakwazi ukuthi uma sebeqedile ukufunda leso sigaba, bese bezihlola ukuthi ngabe basiqonda kahle yini. “Lokhu esikwenzayo kuwukulekelela abafundi noma ukwengeza ngaphezu kwalokhu abazobe bekufunda phambi kwelecturer. “Okunye okuhle ngale ndlela wukuthi uma uthisha efundisa, uyakwazi ukuziqopha bese efaka leso sithombemnyakazo online, ukuze ubafundi bezokwazi ukubuyekeza abebekufunda, kusizakale nalabo abakade bengekho. “Lokhu kuwukwengeza nje indlela yokufunda ezosiza ukuba abafundi basheshe bakuqonde abasuke befunda ngakho,” kusho yena. Lo mfundaze weLANGA neBerea Tech, ubalwa neyimbijana yalolu hlobo ebhekelela abafundi kungakhathalekile ukuthi benze ziphi izifundo futhi baphase kanjani, inqobo nje uma benikwe ithuba lokuqhubeka nemfundo ukuze kusasa baphume bayosebenza babambe iqhaza emnothweni wezwe.
Previous articleUBaxter ukhala ngobuthaka beChiefs
Next articleSITHOLAKALE EDANYINI ISIDUMBU SOBETHUNJIWE